Mouse Ce Certification, Bhatiri Certification, Bhatiri Kuyedzwa - Anbotek
Kuvhenekesa simba rekushandisa lab
Yemunharaunda masevhisi: Inofananidzwa nemasangano makuru akadai seTUV, SGS uye Intertek, mutengo wedu unongova chikamu chimwe muzvitatu chavo, pamwe nepfupi kutungamira nguva. Yemahara retest sevhisi inowanikwawo. Iwe unofanirwa kutumira masampuli kamwe chete, kuyedzwa kwese uye chitupa zvinogona kupedzwa mune yedu pachedu lab muSenzhen, China.
Assurance Assurance: Kana Anbotek aine mukana wekusarudzwa serebhu yako muChina, bvunzo dzino buda murabhoritari kune mutengesi wako weChinese, kunyangwe kupasa kana kukundikana, isu tinokuzivisa chokwadi panguva yekutanga kudzivirira kubva kumishumo yenhema uye zvisiri- kuenderana zvigadzirwa.
Value Added Services Kuve wako wekudyidzana naye, isu tinokwanisa kukupa anotevera emahara masevhisi a) yemahara-kune-imwe yekubvunza masevhisi kugadzirisa kwese kuyedza uye zvitupa zvinosangana nazvo mumusika wepasi rose kuwana zvigadzirwa zvako. b) iko kwechokwadi kubvunza basa kwemishumo uye zvitupa. c) kurudziro yevanopa mhando yepamusoro. Tine dhatabhesi ye50,000 vanokwanisa vatengesi (vagadziri) muChina,
CE Certification Kubatsira Tinogona kuyedza uye kugadzirira, gadzirisa iwo akakwana, asina chaanopomerwa uye asina mubvunzo mubvunzo bvunzo maererano neEuropean LVD, EMC, ROHS, RED, MD Mirayiridzo neMitemo. Iko kunaka uye kutungamira nguva yekuyedzwa uye kubvumidzwa kuchakushamisa iwe uye kupfuura mutengo watinopa.
Anbotek ine inotungamira pasi rose EMC rabhoritari, inosanganisira: maviri matatu-mita nzira yakazara wave antrum makamuri (bvunzo frequency kusvika 40GHz), makamuri mana ekudzivirira, imwe yemagetsi electrostatic (ESD) imba yekuyedza, uye imwe yekurwisa-kupindira murabhoritari. inogadzirwa uye yakavakwa neGerman ROHDE & SEHWARZ, SCHWARZBeck, Switzerland EMC Partner, America AGILENT, TESEQ uye mamwe makambani epamusoro epasi rese muindastiri. ZVIMWE
Radio frequency murabhoritari
RF Lab inoumbwa nemakumi mazhinji evakuru vasina waya kutaurirana tekinoroji nyanzvi uye mainjiniya, anofukidza China SRRC, EU RED, United States FCC ID, Canada IC, Japan TELEC, Korea KC, Malaysia SIRIM, Australia RCM isina chigadzirwa chechigadzirwa mune anopfuura makumi mana nyika. nematunhu. ZVIMWE
Electrical chengetedzo rabhoritari
Kudzivirira Laborator ndeimwe yemarabhoritari ekutanga akasimbiswa muAnbotek Kuyedza, ichishandira kuyedzwa kwekuchengetedzwa uye kupihwa humbowo hwezvinhu zvakasiyana siyana zvekutengeserana neimba zvigadzirwa zvemagetsi nemagetsi Nemidziyo yekuyedza yepamusoro, ruzivo rwakapfuma mumaprojekiti ekuchengetedza uye anopfuura makumi maviri mainjiniya ehunyanzvi, Anbotek Yekuyedza Institution inogona kuzadzisa zvizere zvinodiwa nevatengi zvekuyedza uye kupihwa chitupa. ZVIMWE
Nyowani simba bhatiri rabhoritari
Kuti tishande pamwe nekuvandudza pamwe nekushandurwa kwebhizimusi indasitiri, Anbotek Kuedza kwakasimbisa zvakanyanya kudyara mune simba rekuchengetera bhatiri uye simba bhatiri rabhoritari mumakore achangopfuura, yakagadziridza akasiyana mabhatiri ekuyedza zviridzwa nemidziyo, uye vakaunza vakuru mainjiniya ebhatiri uye mahunyanzvi. ZVIMWE
Kudya Vanowona uye Zvevatengi Zvinhu ZveRabhoritari
Tine makore mazhinji ehunyanzvi hwekutsvagisa uye ruzivo rwekuyedza mumunda wezvinhu zvekubata zvekudya. Minda inozivikanwa neCNAS neCMA inovhara izvo zvazvino chengetedzo zvinoda zvekudya zvekudyidzana munzvimbo yepasirese.Consumer nhumbi rabhoritari inyanzvi iri kuita zvemagetsi zvigadzirwa, mota, matoyi, machira uye zvimwe zvigadzirwa zvevatengi kuyedza, kuita kwekuongorora uye kugadzirisa basa masangano. ZVIMWE
Anbotek Yekuyedza Institution Kuvimbika Rabhoritari inzvimbo yehunyanzvi yebasa inoongorora kuyedzwa kwemagetsi nemagetsi zvigadzirwa Tarisa pane chigadzirwa chigadzirwa uye nekuvimbika kutsvagisa uye kubatsira vatengi kuvandudza chigadzirwa chigadzirwa. ZVIMWE
ZveMotokari Zvitsva Zvekushandisa & Zvikamu zveRabhoritari
ZveMota Zvekushandisa & Zvikamu Laboratory ndeyechitatu bato rabhoritari inonyanya kuongorora mota zvigadzirwa.Pari zvino, kambani yakawana CNAS, CMA uye CCC chitupa chemotokari yemukati zvinhu.Tinogona kukupa iwe yehunyanzvi uye yepamusoro-imwechete-yekumira sevhisi mu munda wekuyedzwa kwepfuma yezvivakwa zvemukati / zvekunze zvekushongedza zvinhu, VOC kuyedzwa kwezvinhu uye zvikamu, auto muviri zvishongedzo kuyedzwa, nezvimwe. ZVIMWE
Akangwara kuvhenekesa magetsi kushanda & mwenje mashandiro erabhoritari
Tine makore anopfuura gumi eruzivo mune yepasirese setifiketi sevhisi mumunda wekuvhenekesa simba kugona chitupa. Isu takasimbisa hukama hwakanaka hwekudyidzana nevatengi vanoverengeka uye takaunganidza makumi ezviuru emabudiriro ezvitupa. Panguva imwecheteyo, ine hukama hwepedyo neUL, BV, ETL, EPA, DLC, TUV SUD, TUV Rheinland nemamwe masangano kuGerman, uye inonakidzwa nezvakanaka zviri pachena mukubatana nzira. ZVIMWE
Yese yekuchinjisa sevhisi
Kutamisirwa kwepasi rose uye Imwe Bhandi Uye Imwe nzira chitupa Anbotek ave achishanda mukubvumidzwa kwepasi rose kweanopfuura makore gumi, uye akaunganidza ruzivo rwakakura muCCC, SABER (yaimbove SASO), SONCAP, TUV MARK, CB, GS, UL, ETL, SAA uye mamwe masitifiketi minda. ZVIMWE
Seye anotungamira mupi weiyo photovoltaic module uye chikamu chekuyedza uye zvitupa masevhisi kuChina, Anbotek Testing Co, Ltd. ine epasi rese yekuyedza michina uye yakatenderwa uye kuzivikanwa neCNAS, CBTL, TUV, nezvimwewo, ichipa yakakodzera kuchengetedzeka uye mhando mabasa yeiyo yepasi rose photovoltaic indasitiri. ZVIMWE
Shenzhen Anbotek Compliance Laboratory Limited (Yakapfupikiswa seAnbotek, Stock kodhi 837435) yakazara, yakazvimirira, ine chiremera chechitatu-bato rekuyedza muviri nemambure ebasa munyika yese. Sevhisi zvigadzirwa zvigadzirwa zvinosanganisira Internet yezvinhu, 5G / 4G / 3G zvigadzirwa zvekutaurirana, mota dzakangwara uye zvinhu zvadzo, simba nyowani, zvinhu zvitsva, muchadenga, njanji yekufambisa, dziviriro yenyika nemaindasitiri emauto, huchenjeri hwekugadzira, nharaunda yezvakatipoteredza uye nezvimwe.
Unyanzvi uye hwakasimba mabasa ekuyedza ZVIMWE
Chivimbiso chiremera chisina tsvete yekusimbisa data ZVIMWE
Yenyanzvi mhinduro yekugadzirisa zvigadzirwa chitupa kutenderera matambudziko, kuitira kuti nyika igovane zvigadzirwa zvemhando yepamusoro ZVIMWE
Kumusoro-kumusoro masevhisi ekupa epasi rese kudzidziswa, manejimendi, kuongorora kumusoro-kumusoro masevhisi kugutsikana kwako, kuchengetedza kukosha kwangu. ZVIMWE